महिलाका कुन-कुन अंगमा पुग्छ पुरुषको कर्के नजर ? – Gandaki Voice
जिबाखोलाको पुलमा प्रेसर कुकर बम फेला
Home/अन्य/महिलाका कुन-कुन अंगमा पुग्छ पुरुषको कर्के नजर ?
महिलाका कुन-कुन अंगमा पुग्छ पुरुषको कर्के नजर ?
पोखरा, १७ पुस ।
जब एक पुरुषको एक महिलासँग जम्काभेट हुन्छ उसको पहिलो नजर महिलाको कुन अंगमा पर्ला ? धेरै महिलाको अनुमान फेल खान सक्छ।
पुरुषको पहिलो नजर महिलाको छात्ती पर्छ भन्ने धेरै महिलालाई लाग्दो हो। तर, होइन। पछिल्लो एक सर्वेक्षणले देखाए अनुसार पुरुषको पहिलो नजर महिलाको आँखामा पर्छ ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिएको एक सर्वेक्षणको अनुसार आँखापछि पुरुषहरुको नजर उनको मुस्कानमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसपछि मात्रै पुरुषको नजर अन्त मोडिन्छ । सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार ७० प्रतिशत पुरुषको पहिलो नजर आँखामा पर्छ । ७० प्रतिशत पुरुषले पहिलो भेटमा महिलाको आँखामा सबैभन्दा पहिला हेर्छन् ।
ब्रिटेनको आई ड्रप नामको संस्थाले २ हजार मानिसमा यो सर्वे गरेको थियो । जसमा १ हजार महिला र १ हजार पुरुष सामेल थिए । यिनीहरुलाई जब पहिलो पटक ‘अपोजिट सेक्स’को मानिसहरुसँग भेट हुन्छ तव कुन अंगमा पहिलो नजर जान्छ भनेर सोधिएको थियो । जसमा ७० प्रतिशतले पहिलो नजर आँखामा, दोस्रोमा मुस्कान र तेस्रोमा महिलाको छात्तीमा जाने बताए ।
सर्वेकाअनुसार पुरुषको केही ध्यान महिलाहरुको तौल र हेयर डिजाइनमा पनि जाने पाइएको थियो । यी सबैमा नजर परिसकेपछि पुरुषहरुलाई यदि ती महिला मनपरेमा मात्र उनीहरुको नजर ड्रेस सेन्स र उचाईमा जान्छ ।
सर्वेको अनुसार पुरुषहरुले महिलाहरुको नाकलाई सबैभन्दा कम महत्व दिएको पाइयो । मतलब पुरुषहरुले महिलाको नाकलाई सबैभन्दा अन्तिममा हेर्छन् । तर महिलाहरुले पुरुषहरुको उचाईलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् । महिलाहरु पुरुषहरुको छालाको रंगमा पनि ध्यान दिँदैनन् ।-एजेन्सी
टोपीको किस्सा : दायाँ ढल्काइ भगवानलाई, बायाँ ढल्काइ प्रेमिकालाई, जुवाडेले कता ढल्काउँछन् ?
भीड रोक्न पानीको फोहोरा फाल्ने गाडी पोखरामा, लागत छ करोड
शारीरिक सम्बन्धका क्रममा महिलाका १० चाहना